Yiri ihe mkpuchi ihu n'ụlọ, kesara ndị ọzọ: PM ruo BJP
NEW DELHI: Prime Minista Narendra Modi rịọrọ ọkwa na faịlụ BJP ka ha kesaa ihe nkpuchi ma ọ dịkarịa ala mmadụ 5-7 ma tinye ha n'ụlọ, ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume. Na-agwa BJP cadre site na njikọ vidiyo na ụbọchị ntọala 40th nke nnọkọ ahụ na Mọnde, Modi rịọrọ onye otu ọ bụla arịrịọ ise. Ọ emp ...
Ikpuchi-mkpuchi, mmekọrịta mmadụ na ibe ya kwesịrị ịmanye ya:
New Delhi: Otu ụlọ ọrụ na-ahụ maka ụlọ na Union kwuru na iwu ụfọdụ dị ka ịkebe ihu, na-eme mmekọrịta mmadụ na ibe ya na enweghị nzukọ nke mmadụ ise ma ọ bụ karịa ka a ga-agbasosi ike na ebe ọha iji hụ na mkpọchi mkpọchi jidere iji gbasaa coronavirus bụ implem ...
Maharashtra machibidoro ịpụ apụ na-enweghị ihe nkpuchi
Gọọmentị Maharashtra nyere iwu na Wednesde na-amachibido ndị mmadụ ịpụ n'ụlọ ha na-enweghị ihe nkpuchi, mmepe nke bịara na mbido ọgba aghara na ọnụọgụ ikpe nke Covid-19 na obodo ndị dị ka Mumbai na Pune. Iwu ahụ bụ nke ndị isi obodo Mumbai nyere nyere ...
Ihe osise Banksy na-enweta mgbanwe; 'Nwaanyị nwere Eardrum akpọrọ
LONDON: “Girl Girl with a Pierced Eardrum” nke Banksy emelitere maka oge coronavirus na mgbakwunye nke mkpuchi ịwa ahụ na-acha anụnụ anụnụ. Ogwu a, ihe a na-eme Dutch omenka Johannes Vermeer's “Girl with a Pearl Earring” but with a security mkpu na-anọchi ube ...
Chandigarh: Ndi ahutara na-enweghi nkpuchi ihu na ebe ndi mmadu
Onye ọ bụla achọtara na-enweghị mkpuchi ihu n'ihu ọha ga-ejide ya, gọọmentị Chandigarh kwuru na iwu enyere na Tọzdee. Ọchịchị UT na Tuesday mere ka ọ bụrụ iwu na ndị mmadụ ga-eyi ihe nkpuchi na ebe ọha iji chọpụta mgbasa nke coronavirus. Dị ka iwu nyere ...